Moments leh saaxiibo 45
Waa maxay Waa maxay lagama maarmaanka u ah Koboca Baaqa?
Adoo ka fakaraya sida ugu wanaagsan ee loogu adeego wixii loo hibeeyay, kana shaqeyso.
Daacadnimadu waa xaalad ama qaab maskaxeed oo ku wajahan mabda 'ahaan, sababi, ahaansho ama qof, iyo u diyaarsanaanta waxqabadka xoogaa ah mid loo hibeeyo. Kobinta cibaadada waxay kuxirantahay awooda hal qof inuu qabto, u adeegto, iyo awooda waxaa kusii kordhaya iyadoo lashaqeysiinaayo garaadka. Dabeecadda cibaadada leh ayaa qofka ku kalifaysa inuu muujiyo dadaalkiisa isaga oo samaynaya wax muujinaya cibaadadiisa. Soo jiidashadan hanashada ah had iyo jeer ma soo baxdo natiijooyinka ugu wanaagsan, laakiin, in kasta oo ujeedadu tahay tan ugu wanaagsan, waxa la qabtay waxay ku noqon kartaa dhaawicii wixii loo qabtay.
Dabeecadaha kalifaqdu waxay ka shaqeeyaan qalbiga. Ficilkan ka yimid qalbiga, in kasta oo uu yahay bilowga saxda ah, kuma filna koritaanka dhabta ah. Aqoonta ayaa lagama maarmaan u ah ficil caqli leh. Nin leh dabeecad cibaado leh badanaa ma dhagaysto caqliga ka hor ficilkiisa, laakiin wuxuu door bidaa inuu raaco waxa qalbigiisa ka soo baxa. Hadana, iyada oo kaliya layliyada maskaxda ayaa aqoonta lagu heli karaa. Tijaabada dhabta ah ee ka go'naanta qofku waa in wax laga barto, laga fikiro, in maskaxda laga shaqeeyo danaha ugu wanaagsan ee uu u hibeeyo. Haddii mid uu ku noqdo ficil shucuureed oo uu ku guuldareysto inuu u fikiro si samir iyo dulqaad leh, markaa ma leh cibaado run ah. Haddii mid leh dabeecad cibaado leh uu ku adkaysto jimicsiga maankiisa oo uu helo awoodda si uu si fiican ugaga fikiro wuxuu ku dari doonaa aqoon si uu ugu kali yeelo iyo kartidiisa uu ugu adeego wixii uu u go'ay wuu sii kordhayaa.
Waa maxay Nooca fooxa, iyo Muddo intee la'eg ayaa la isticmaali jiray?
Nooca fooxa waa dhulka. Dhulku, sida mid ka mid ah afarta cunsur, wuxuu u dhigmaa dareenka urka. Fooxdu waa iskudarsan udgoonkooda xanjo, dhir udgoon, saliid, ubax, alwaax kaas oo inta lagu gudajiro uu bixinayo ur wanaagsan oo ka yimaada qiiqyadeeda.
Foox ayaa la isticmaali jiray kahor intaanu qofku bilaabin inuu qoro machadyada, caadooyinka, iyo dhacdooyinka. Qormo badan ayaa kahadlaya fooxa sida ay lagama maarmaanka u tahay howlaha cibaadada. Foox waxaa loo adeegsaday cibaadaadka iyo allabari ahaan, caddeyn u ahaanta cibaadada iyo caabudidda, waxa caabuda. Meelo badan oo kitaabka ka mid ah, bixinta fooxa sida ficil cibaadada waxaa lagu sharaxay waqti aad u dheer, iyo xeerar la bixiyo nooca fooxa in loo isticmaalo, diyaarinteeda iyo gubashadeeda.
Ma jiraan wax Faa'iidooyin ah oo laga helay Gubashada fooxa, inta lagu guda jiro daweynta?
Faa'iidooyinka ayaa laga yaabaa inay ka soo baxaan gubidda fooxa inta lagu gudajiro fikirka, arrimaha la xiriira adduunyada jireed iyo astaanta. Gubashada fooxdu ma gaadhi doonto wixii ka shisheeya astral ama adduunka maskaxda. Gubashada fooxdu kama caawin doonto ka fiirsashada maaddooyinka la xiriira adduunyada maskaxda ama ruuxa.
Haddii mid u daacad u noqdo ruuxa weyn ee dhulka iyo jinniyiinta dhulka ka sii yar, ama wax kasta oo ka mid ah dunnida adduunka, markaas wuxuu heli karaa faa'iidooyin ku saabsan gubidda fooxa. Wuxuu helaa faa iidooyinka la siinayo. Dhulku wuxuu cunto siiyaa dadka jidh ahaan u quudiya. Nuxurkeedu wuxuu kaloo kobciyaa xayawaannada dhulka iyo waxa ku jira dunida astral-ka. Gubashada fooxdu waxay u adeegtaa laba ujeedo. Waxay soo jiidataa oo waxay aasaastaa xiriirkii lala yeesho aadanaha la doonayo, waxayna dib u dhigeysaa wixii kale ee fooxu uusan ku habboonayn. Haddii mid uu doonayo jiritaanka saameynta qaar, markaa gubashada fooxa ayaa laga yaabaa inay ka caawiso soo jiidashada saameyntooda iyo aasaasidda isukeenid. Si kastaba ha noqotee, haddii qofku aanu aqoon dabeecadda fooxa oo uu isticmaali lahaa oo uusan aqoon nooca dabeecadda saamaynta ama ahaanta uu doonayo, markaa waxaa suuragal ah inuu helo halkii uu ka heli lahaa faa'iidooyinka, waxa aan la jeclayn iyo waxyeelada leh. Tani waxay qusaysaa ka fiirsashada quseysa muuqaalka jireed iyo astaan ama maskaxda, iyo walxaha dareenka leh.
Marka laga fiirsado halista maaddada maaddada maskaxda iyo tan ruuxiga ah, fooxa looma baahna. Fikirka keligiis iyo fikirka maskaxda ayaa go'aamiya waxa saameynta ku jiri doonta iyo waxa binu'aadamka u adeegaya ee ka fiirsanaya maskaxda iyo maskaxda. Gubashada fooxdu waxay badanaa maskaxda ku haysaa ashyaa'yo xasaasi ah waxayna ka horjoogsataa inay gasho xaalad ah soo jeedin lagama maarmaan u ah ka fiirsashada ku saabsan adduunyada maskaxda iyo tan ruuxiga ah.
Saamaynta Guba U gubo Miyuu Ku Muuqan Yahay Mid Ka Mid Ah Diyaaradaha?
Iyagu waa. Waxay kuxirantahay awooda howlfuliyaha macluumaadka uu ka haysto mawdigiisa, la arki karo iyo saameyn kale oo xasaasi ah. Qiiqa iyo qiiqa ka soo baxa fooxa wuxuu siiyaa xoogga iyo jirka shay ee ay aadanaha jecel yihiin uguna muuqan karaan. Tani waa mid ka mid ah sababaha ay saaxiriinta iyo indha-indheeyayaashu u adeegsan jireen foox markay ku baryaan iyo ducadooda. Marka la gubo saamaynta fooxa waxaa lagu soo saaraa diyaarado kale oo aan ahayn jir ahaaneed, laakiin qofku waa inuu lahaadaa maskaxdiisa maskax ahaaneed oo uu tababbaray maskaxdiisa si uu u arko kuwan. Kadibna wuu arki doonaa sida uu u ogaanayo sababaha saameynta iyo ulahaku u jiito ama uga dhaadhiciyo foox guban, sida ay u saamaynayaan kan fooxa u bixinaya, iyo natiijooyinka kale ee ka yimaada gubidda fooxa.